डचटाउन ग्रीष्मकालीन Vibes • जून 5th मा डाउनटाउन डचटाउन
डचटाउन ग्रीष्मकालीन Vibes प्रत्यक्ष संगीत, खाना र पेय, एक रोजगार मेला, सामुदायिक संगठन, र निश्चित रूप मा किनमेल फिचर हुनेछ! हाम्रो डाउनटाउन डचटाउन पसलहरू र बुटिकहरू साथसाथै शहर वरिपरिका पप-अप विक्रेताहरू। बाट एउटा काट्नुहोस् शहरी Eats छिमेकी फूड हल वा अन्य स्थानीय खाद्य ट्रक र विक्रेताहरूबाट। हामीसँग नेबरहुड इनोवेशन सेन्टरमा ब्यान्डहरू र डीजेहरू छन्, र बाट रक्सी पियौं अर्थबाउन्ड बियर.
हामीसँग हाकिमहरू र रोजगार संगठनहरू पनि हुनेछन् जसले डचटाउनमा भाडामा काम गर्न खोजिरहेका छन्, साथसाथै समुदाय संगठनहरू जुन गर्मी र त्यसपछिका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछन्।
डाउनटाउन डचटाउनमा ठूलो दिन पछि, हाम्रो पहिलो सँगै साँझ बन्द गर्नुहोस् चलचित्र रात २०२१ को! नि: शुल्क प्रदर्शनको लागि सूर्यास्तमा मार्क्वेट पार्कमा आउनुहोस् जुरासिक पार्क हाम्रो २२ फिट ठूलो स्क्रीन मा!
डचटाउन गर्मी Vibes द्वारा प्रस्तुत छ क्रफोर्ड-बट्ज बीमा र प्रायोजित द्वारा अर्थबाउन्ड बियर, रोजगार जडान, र उपचार हिंसा।
मार्क्वेट पार्क चलचित्र नाइटहरू द्वारा प्रायोजित हो डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, रोजगार जडान र उपचार हिंसा, लुथरन विकास समूह, मूल क्रूसोको, सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल, सेन्ट मेरी उच्च विद्यालय, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम.
हामीलाई मा मुख्य स्टेजमा सामेल हुनुहोस् छिमेकी इनोवेशन केन्द्र Meramec र Compton को कुनामा DJs, ब्यान्ड, र अधिक दिनको लागि! तपाईं त्यहाँ हुँदा, हाम्रो बाट एक पेय लिनुहोस् अर्थबाउन्ड बियर हाम्रो पप-अप फूड विक्रेताहरूबाट स्ट्यान्ड र एक स्न्याक्स लिनुहोस्।
Pm बेलुका: डीजे प्रॉस्पेक्ट आउट Hrr
Pm बेलुका: Bruiser रानी
Pm बेलुका: Stewie Chops
Pm अपराह्न: Ztub अनुभव
Pm बेलुका: बाट ठेगाना स्थानीय निर्वाचित अधिकारीहरु राज्य प्रतिनिधिहरू स्टीव बटज र रसेन एल्ड्रिज, र अधिक सहित
Pm बेलुका: लिलशाको र अकिम ब्रायन
Pm बेलुका: १and र गणना (डीजे सेट)
भाग लिने पसल, विक्रेता, र संगठनहरू
हामी अझै पनि मान्छेहरूलाई साइन अप गर्दैछौं, तर यहाँ हाम्रो कन्फर्मेड प्रतिभागिहरूको सूची छ। बाहिर आउनुहोस् र उनीहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्!
डाउनटाउन डचटाउन विभिन्न अनौंठो बुटीक, भिन्टेज र आधुनिक पुन: बिक्रि पसल, रेस्टुरेन्ट, र अन्य खुद्रा विक्रेता र सेवाहरूको घर हो। हामीसँग मानहरूको धेरै प्रकारको अफर्युन प्रसादहरू छन् जुन हराउन सकिदैन। तपाईं छिमेकमा हुँदा पाइला चाँडो गर्नुहोस्।
रचनात्मक अभिव्यक्ति कस्टम डिजाइन
Trinitas होम स्वास्थ्य सेवा
कालो रातो फार्महरू (बोटबिरुवा, कपडा, र सौन्दर्य उत्पादनहरू)
घरमा शारीरिक पसल (सौन्दर्य र कल्याण उत्पादहरू)
Byanymeanss र कुराहरु (गहना, पर्स, र टोपी)
एनोला लिन (मूल कलाकृति)
किलर घटता कपडा (पुन: बिक्रि कपडा र उपहार)
म्याटिफ व्यापार परामर्श (परामर्श सेवाहरू, बीमा, र अधिक)
रुमिनिस्टिक्स (साबुन, अरोमाथेरापी, र जर्नलहरू)
पवित्र प्रतीक (क्रिस्टल र सामान)
Selah वस्त्र (तौलिए, ट्याks्क, र प्रिन्टहरू)
नाश्ता (खाजा र नवीनता उपहार)
एकै चरणमा जानुहोस् (नेल आपूर्ति)
सेन्ट लुइस मेट्रो बजार (ताजा र किफायती किरानाहरू)
शहरी बुद्ध बुटिक (शरीर हेरचाह, गहना, मसाज, र अधिक)
खाना र पेय पप-अप
A & E मिठाई र व्यवहार गर्दछ
सेन्ट लुइस कर्मचारी को विभाग
डचटाउन हेरचाह केन्द्र
दक्षिण शहर अस्पताल
एसटीएल युवा कार्यहरू
एक मिशन मा ताराहरु
सेन्ट लुइस समुदाय संगठन को संघ (SLACO)
सेन्ट लुइस नागरिक अधिकार प्रवर्तन एजेन्सी (CREA)
सेन्ट लुइस वित्तीय सशक्तिकरण को कार्यालय (OFE)
क्वाटाको साथ क्लाउन-ना-राउन्ड (अनुहार चित्रकारी र बेलुन घुमा)
खेल, रing र अधिक
तल दायर गरिएको डचटाउन कार्यक्रमहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र डचटाउन कार्यक्रमहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुन 2nd, 2021 .
DutchtownSTL.org डचटाउन कार्यक्रमहरू डचटाउन गर्मी Vibes